Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Iharan'ny horohoron-tany mahery i Indonezia
Nisahotaka ny olona ary nihazakazaka nivoaka ny tranony rehefa nisy horohoron-tany 6.2 namely ny moron'ny nosy Simeulue, andrefan'ny Sumatra. Tsy nisy ny fampitandremana tsunami ary tsy nisy ny tatitra momba ny ratra na fahasimbana teo noho eo.
Ny horohoron-tany 6.2 maridrefy dia 20 kilometatra ny halalin'io (12.5 miles) teo akaikin'ny moron'ny nosy Simeulue, andrefan'ny Sumatra, raha ny fanadihadiana nataon'ny US Geological Survey tamin'ny 13.05 ora teo.
Tsy mbola nisy ny aina nafoy na ny fahasimban'ny fotodrafitrasa hatreto.
Indraindray i Indonezia dia mizaka ny asan-tanety sy volkanika matetika noho ny toerana misy azy ao amin'ny "Ring of Fire" Pasifika, izay nifandonan'ireo takelaka tektonika.
ATM: mitentina 810 tapitrisa dolara amerikana ny fizahan-tany any avaratra mankany GCC amin'ny 2024
Southwest Airlines dia manampy sidina sivy avy any amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenen'i Kansas City
45 minitra lasa izay
Vaksiny feno ianao. Ary ahoana?